DAAWO Tigreegi Itoobia oo ku Dhawaaqay inay noqonayaan Dal Madax banaan. – Xeernews24
DAAWO Tigreegi Itoobia oo ku Dhawaaqay inay noqonayaan Dal Madax banaan.
31. Juli 2018 /in VIDEO/AUDIO /von admin
“Laba mid ayaa dhici doonta in annaga iyo qowmiyadaha kale aan Ethiopia ugu wada noolaano si xushmad leh, ama inaan burburino Ethiopia, oo koox walba ay dal sameysato” ayuu yidhi Debrestion Gebremichael isaga oo ku labisan koofiyad uu ku sawiran yahay ra’iisul wasaarihii hore ee Ethiopia Meles Zenawi, oo isna Tigray ahaa.
Qaar ka mid ah warbaahinta dalka Ethiopia ayaa cinwaan ka dhigay “TPLF waxay dib usoo saartay siyaasaddii xornimada ee sanaddii 1976­kii”
“Dadka Tigrayga iyo TPLF iyo Eritrea waxa ay si iskula mid ah ula dagaalameen hal cadow, waxaana Tigrayga ay hadda diyaar u yihiin inay la kulmaan walaalahooda Eritrea” ayuu yidhi Debrestion Gebremichael.
Tigrayga oo ku dhowaad 25 sano xukumayey Ethiopia, ayaa hadda ay u muuqataa in taladii iyo awooddii ay dalka ku lahaayeen ay agacantoota ka baxday, waaxana ay aad u dhibsanayaan siyaasadda Ra’iisul wasaare Abiy Ahmed ee talada dalka oo dhan looga qeyb­gelinayo qowmiyadaha kale.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/07/Debretsion2.jpg 1052 1600 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-07-31 09:59:162018-07-31 09:59:16DAAWO Tigreegi Itoobia oo ku Dhawaaqay inay noqonayaan Dal Madax banaan.
Ma Run Baa In Oromo/Gaalla Degi Jirtay Soomaaliya? XOG: Dagaalka u dhaxeeya Axmed Madoobe iyo Cabdi Iley oo Heerkii ugu xumaa ...